Arvato စနစ်များ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Author Archives: Arvato စနစ်များ
Author Archives: Arvato စနစ်များ
Arvato စနစ်များပြည့်စုံထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု suite ကိုအတူ APTN ကနေဒါအာဏာ
Arvato စနစ်များကနေဒါ• Arvato စနစ်များအတွက်၎င်း၏စျေးကွက်ခဲသည်၎င်း၏အသံလွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝအကွာအဝေး•အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါင်းအကြောင်းအရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်စျေးကွက်အသံလွှင့်အဆ 27 များအတွက်အဖြေတစ်ခုပါဝင်သည်နှင့်အတူကနေဒါနိုင်ငံထုတ်လွှင့်ပေးနေကိုတိုးချဲ့။ သြဂုတ်လ 2019 (Arvato စနစ်များ) Gütersloh - APTN, ကနေဒါအတွင်းပထမဆုံးအမျိုးသားရေးဌာနေရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်နှင့်ကမ္ဘာကြီး, ယခု ...
Arvato စနစ်များအမည်များ Kurt Krinke ဒုတိယသမ္မတအရောင်း - မြောက်အမေရိကမှာထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်း
ဒုတိယသမ္မတအရောင်းဖို့ရာထူးတိုးအမေရိကန်အရောင်းဟောင်းဒါရိုက်တာ - ကထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းရွေ့လျား၏အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းမြောက်အမေရိက•ဝါရင့်မြောက်အမေရိကအတွက်အဓိကစျေးကွက်ဖြတ်ပြီးအရှိန်အဟုန်မောင်းထုတ်ရန် Arvato စနစ်ရဲ့အထင်ကြီးတိုးတက်မှုနှုန်း•အာရုံစူးစိုက်မဟာဗျူဟာ (Arvato စနစ်များ) ကားမောင်းဆက်လက်ရာထူးတိုးဖြစ်ပါတယ်Gütersloh // နယူးယောက် - Arvato စနစ်များ Kurt Krinke ဒုအမည်ရှိထားပြီးကြေငြာခဲ့သည် ...
VPMS MediaEditor, browser ကို-based NLE, NAB 2019 မှာလွှတ်တင်
Arvato Systems မှ Las Vegas မှာကုန်ပစ္စည်းမီးမောင်းထိုးပြနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက် Arvato စနစ်များကြောင့် VPMS MediaEditor အသစ်တစ်ခုကို browser-based မဟုတ်သောဖြန့်ချိမည်ကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကို browser အတွင်းမှသတင်းစာပညာဇာတ်လမ်းပြောပြဘို့မြန်ဆန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘရောက်ဇာကို-based တည်းဖြတ်ရေး formats အမျိုးမျိုးနဲ့မျိုးစုံပလက်ဖောင်းမှထုတ်ဝေဖွင့်မည်ဖွ -linear တည်းဖြတ်ရေး NAB 10106 မှာရပ် SU2019 အပေါ် (NLE) ဖြေရှင်းချက်။ ပထမတစ်ခုကနည်းပညာအဖြစ်ရှုမြင် ...
နောက်တဖန် Arvato စနစ်များအတွက် AIB ဂျူရီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး
လိုက်ဖို့ဗီဒီယို, အသံဖိုင်နှင့် Arvato စနစ်များ•အပြန်အလှန်ဘဏ်ဍာလန်ဒန်•နိုင်ငံတကာဆုအတွက်တင်ပြခံရဖို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာဆုပေးပွဲ "AIBs" (Arvato စနစ်များ) Gütersloh / လန်ဒန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျူရီထောက်ခံပါတယ် - နိုဝင်ဘာလ7တွင်နိုင်ငံတကာအသံလွှင့် (AIB) အတွက်အသင်းမှတင်ပြပါလိမ့်မယ် ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ 2018 AIB ဆုပေးပွဲ။ Marcus Metzner, Arvato စနစ်များမှာ CMO, တစ်ဖန်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် ...
Arvato စနစ်များRTÉအိုင်ယာလန်မှာကျယ်ပြန့်ထုတ်လွှင့်အသွားအလာ & အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းကိုအနိုင်ရ
RTÉ, အိုင်ယာလန်ရဲ့များ၏သမ္မတနိုင်ငံ - ထုတ်လွှင့် Arvato စနစ်များ• Arvato စနစ်များအပေါ်မှီခိုအိုင်ယာလန်ရဲ့အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝ linear နှင့် Non-linear ချန်နယ်များအတွက်RTÉ•ငြ့်အရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အစီအစဉ်ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှာယင်း၏ BMS Avatega ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် (Arvato စနစ်များ) Gütersloh / Cologne / Dublin မိတ်ဆက် အများပြည်သူထုတ်လွှင့်၎င်း၏အသစ်ကထုတ်လွှင့်အသွားအလာ & အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုအကောငျအထညျဖျောဖို့ Arvato စနစ်များပြန်တမ်းထားပါတယ် ...
IBC - Arvato စနစ်များ B3 •ဤနှစ်တွင်ရဲ့အာရုံကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကို (Arvato စနစ်များ) နဲ့ပေါင်းစည်းရေး Streaming •ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် Advertising ကြော်ငြာဖြေရှင်းချက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်Güterslohရပ်ခန်းမ 38 ၌ဤနှစ်တွင်ပြန် IBC မှာ IBC • Arvato စနစ်များအသစ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ဖြေရှင်းချက်ဆောင်တတ်၏ နောက်တဖန်ကဒီမှာဖြစ်ပြီး, Arvato စနစ်များကိုဗီဒီယိုပြမှ Vidispine နှင့်အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းဖြစ်ပါတယ် ...
သိုလှောင် / MatrixStore မှဘက်ပေါင်းစုံပေးခဲ့သည်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Matrix နှင့် Arvato စနစ်များကန့်ကွက်
နယူးမိတ်ဖက်Gütersloh / Cologne / automated ထံမှ Arvato စနစ်များ•ကုမ္ပဏီများအကျိုးရှိထံမှ VMPS သို့ပြုလုပ်ရန်ပေါင်းစည်းသည်မိုဃ်းတိမ်• Customer များအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်စပ်ပူးပေါင်း Workflows အကြောင်းအရာငွေရရှိအောင်နှင့်ပိုပြီးယှဉ်ပြိုင် (Arvato စနစ်များ) ဖြစ်လာနိုင်ကြသည် Object ကို Matrix ထံမှ• MatrixStore ထုတ်ပြန်ကြေညာ ကာဒစ်ဖ် - Matrix နှင့် Arvato စနစ်များ Object MatrixStore, ဆုအနိုင်ရတဲ့, မီဒီယာပုဂ္ဂလိကအာရုံစူးစိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကြပါပြီ ...
Arvato စနစ်များအမည်များစယ် Grute အရောင်းနှင့်ဗြိတိန်, အိုင်ယာလန်နှင့် Nordic များအတွက် Busines ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Manager ကို
Arvato စနစ်များဥရောပအသံလွှင့်ရေးအဖွဲ့• Grute အဆိုပါ Arvato စနစ်များအဖွဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရောင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အောင်မြင်မှု၏စည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏ခိုင်မာစေ။ •လာမည့်ဖြစ်ရပ်များမှာတွေ့ဆုံစယ်နှင့် Arvato စနစ်များအဖွဲ့ (Arvato စနစ်များ) Gütersloh / Cologne / လန်ဒန် - Arvato စနစ်များအရောင်းနှင့်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, စယ် Grute အသစ်တစ်ခု Manager ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ သူအာရုံစူးစိုက်ဒစ်ဂျစ်တယ်များအတွက်အိုင်တီထုတ်ကုန်ဖြေရှင်းချက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ် ...
Las Vegas မှာ NAB မှာ Arvato စနစ်များနှင့် Vidispine ပစ္စုပ္ပန်ပူးတွဲထုတ်ကုန်တီထွင်မှု
NAB Show ကို Las Vegas မှ 2018 • Arvato စနစ်များနှင့် Vidispine ပူးတွဲတဲ SU6714 •အိုင်တီဖြေရှင်းချက်တစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်တန်ဖိုးကိုကွင်းဆက်•ရပ်ဧည့်သည်များ EditMate (Arvato စနစ်များ) ၏အခမဲ့အစမ်းဗားရှင်းသီးသန့်မှတ်ပုံတင်ရယူနိုင်သည်ကိုဖုံးလွှမ်းအနာဂတ်-ရှာနေမှာသူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြGütersloh / Cologne / Las Vegas မှာ - 103,000 နိုင်ငံများမှ 166 ဧည့်သည်လှည့်ပတ်ခြင်းနှင့် 1,700 ပြသခဲ့သည်ကျော်နှင့်အတူ NAB ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် ...
Arvato စနစ်များကို Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု, EditMate အနိုင်ရဆု၏ Self-service ကို SaaS ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ
Arvato စနစ်များ NAB 2018 မှာ VPMS EditMate ၏ on-demand ထုတ်ဝေလက်ဆောင်တဲ SU2018 •လာရောက်လည်ပတ်သူများတစ်ဦးအခမဲ့အစမ်းဗားရှင်း (Arvato စနစ်များ) အတွက် register ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျစနေို NAB 6714 • Arvato စနစ်များမှာ software ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်တင်ဆက်Gütersloh / Cologne / Las Vegas မှာ - ဧပြီလ7မှစ. - 12 အဆိုပါ Arvato စနစ်များအဖွဲ့ Las Vegas မှာကျင်းပ NAB Show မှာတွေ့နိုင်ပါသည် ...
ဒေသခံဗီယင်နာထုတ်လွှင့် W24 နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့ R9 သူတို့ရဲ့ linear နှင့် Non-linear အစီအစဉ်ကိုအချိန်ဇယားဆွဲဘို့ Arvato Systems မှ Avatega ကိုသုံးပါ
Arvato စနစ်များ W24 နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ဖြန့်ဖြူး - ပေါင်းစည်းမှုဖို့တိုင်ပင်ထံမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှ (Arvato စနစ်များ) Gütersloh: တီဗီထုတ်လွှင့် digital Arvato စနစ်များဤစီမံကိန်းနှင့်အတူအဆိုပါ Avatega ထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်•နှင့်အတူသြစတြီးယားတီဗီဘူတာကိုထောက်ပံ့ပေး•, Arvato စနစ်များတစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်းကို spectrum ကိုဖုံးလွှမ်းအသစ်သောအဆင့်ကိုရောက်ရှိ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ content စျေးကွက် Arvato နှင့်အတူ R9 (WH Medien GmbH သည်နှစ်ခုစလုံးအဖွဲ့ဝင်များက) ...
EditMate - '' နည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာဆွစ်ဇာလန် AG က (tpc) 'အဘို့စီမံကိန်းများနှင့်မီဒီယာဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ချွေဖြေရှင်းချက်
Arvato စနစ်များသည်၎င်း၏စီမံကိန်းနှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲကိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှု Center မှာ "VPMS EditMate" အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည် - • Arvato စနစ်များGütersloh tpc • EditMate မှာ၎င်း၏စီမံကိန်းနှင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု software ကို "VPMS EditMate" (Arvato စနစ်များ) ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ပူးပေါင်း Workflows သေချာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသော ဆွစ်ဇာလန် AG က (tpc) - ဒါလုပ်နေတာ၌ရှိသကဲ့သို့ EditMate နှင့်အတူ၎င်း၏ပထမဆုံးစီမံကိန်းကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါတယ် ...
Kurt Krinke အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းအဘို့အရောင်း၏အမေရိကန်နိုင်ငံအကြီးတန်းဒါရိုက်တာအမည်ရှိ
ယူအက်စ်အေ• Krinke ဘို့အရောင်း၏အကြီးတန်းဒါရိုက်တာထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုစည်းစိမ်ကိုဆောင်တတ်၏အဖြစ် Kurt Krinke Arvato စနစ်များပူးပေါင်းမည်• Arvato စနစ်များဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပစ်မှတ်ရရှိ•တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Arvato စနစ်များမီဒီယာအဖွဲ့ပေါင်းထည့် key ကိုရည်မှန်းချက်များ (Arvato ဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်အသင်းကိုခိုင်မာစေ systems) Gütersloh // နယူးယောက် - Arvato စနစ်များ Kurt Krinke ကြေငြာခဲ့သည် ...
Arvato စနစ်များဆှီဒငျပေးခဲ့သည်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ 100 ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိသည် Vidispine
နိုဝင်ဘာလ 1, 2017 တွင် Arvato စနစ်များ '' မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) အစုစု•၏အနာဂတျမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, Arvato စနစ်များ Vidispine AB, စတော့ဟုမ်း• Arvato စနစ်များနှင့် Vidispine cloud-based အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုကို enable (Arvato စနစ်များ၏ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ 100% ကိုဝယ်ယူ ) Gütersloh - နိုဝင်ဘာလ 1, 2017 ၏အဖြစ်, Arvato စနစ်များ Group မှ Vidispine AB ၏ကုမ္ပဏီရှယ်ယာ 100% ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ...
dmexco 2017 23 သြဂုတ်လ 2017 (Arvato စနစ်များ) Gütersloh - ဤနှစ်တွင်ရဲ့ dmexco 13th ထံမှ 14th စက်တင်ဘာလ 2017 ဖို့ Cologne တွင် "အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏အသက်ပေါ့" ဟုအဆိုပါဆောင်ပုဒ်အောက်တွင်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလူတိုင်းပြောပြတယ်နှင့်လည်းဖောက်သည်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသက်ရောက်သည်။ ရောနှောဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းအားဖြင့်, Arvato အနေနဲ့ပေါင်းစပ်စျေးကွက်နှင့်စျေးဝယ်သေချာ ...
S4AdOpt - Arvato စနစ်များ Advertising ကြော်ငြာ & Inventory Optimization Tool ကို - ယခုအပြည့်အဝလည်ပတ် TVN, ပိုလန်မှာ
S4AdOpt • Arvato စနစ်များကိုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆက်လက်အတူပိုလန်အကြီးမားဆုံးစီးပွားဖြစ်တီဗီကွန်ယက် TVN (Arvato စနစ်များအပိုဆောင်းဝင်ငွေအလားအလာဖန်တီးခြင်းနှင့်ယင်းထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ထိရောက်မှုတိုးတက်အောင်, S4AdOpt တိုက်ရိုက်ဝင်•ယခု 60 လိုင်းများထက်ပိုမိုဖြတ်ပြီး S4AdOpt အသုံးပြု. •နောက်တစ်နေ့အဆင့်အထိအကြောင်းအရာငွေရှာတာကို ) Gütersloh / Cologne - ထိရောက်သောစာရင်းငွေရှာခြင်းအတွက်သူတို့၏ကြော်ငြာအပေါ်မှီခိုတီဗီထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အလွန်အရေးပါသည် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 212	»